Izambatho zamaSlav zasendulo
Ibhanki ye-Piggy yokupheka kwabantu
Umntwana kwaye uyamnyamekela
Nciphisa ubunzima ngemithetho
Usapho kunye nomtshato
Izicwangciso kunye neeRites
E-United Arab Emirates
Imfashini Isifundo sesifundo
I-style yama-Slavs iyinto elula kwaye engaqondakaliyo, ngoko kunokuba kunomdla ukufunda i-pre-Slavonic fashion. Yintoni ekhoyo emva kwezi mpikiswano, kwaye yiyiphi impahla yeSlavs yamandulo yabasetyhini eyaziwayo ukuba ifikelele? Masiqonde.
Ziziphi iimpahla zabesifazane ezenziwe kwiSlav zasendulo?
Ukufunda ulwazi lweelwimi lwamaxesha amandulo, kwaziwa ukuba okokuqala izinto eziphambili zokwenza iingubo zazifihliwe kwizilwanyana ezibuleweyo kunye noboya. Izikhumba zezilwanyana zasendle zazibhekwa njengento yento yokunethezeka, ngoko ngokuqhelekileyo isebenzisa izikhumba zezilwanyana. Iingcweti zaseSlavic zafunda ukwenza izicathulo ezikhumbeni, kunye neebhanti kunye neengubo. Iincwadi eziphambili zibizwa ngokuba yi-ssma - yinkcenkceshe yenkomo yeenkomo, iibhokhwe kunye namahashe.
Kuyaziwa ukuba ukusuka kwisiqingatha sokuqala se-Millennium AD. ukwenzela ukuveliswa kweengubo kuphela ifilokisi kunye ne-hemp zisetyenzisiweyo. Ngenxa yezi zizathu, umbala ophezulu umhlophe kunye negrey, akukho nto iyaziwa malunga nokudaywa kwezicubu.
Indwangu, i-sermyaga okanye iingubo ezirhwexayo yingubo yeboya, eyasetyenziswa kwii-XI-XIII zeenkulungwane. Kuzo zonke iintsapho zaseSlav, abafazi babenomdla wokubhinqa kunye nokuphambuka ngoncedo lwezinto ezizenzekelayo.
Ngokuqinisekileyo, ezo zizwe ezizityebi kunye neenkosana zathengisa iimpahla zangaphandle, umzekelo we-Byzantine.
Impahla yamandulo yamaSlav yayihluke kakhulu kwiingubo zabamelwane. Ngokwezibhengezo ezibhaliweyo, kunye nezinto zokudala, izinto ezincinci ziyaziwa ngezambatho zabafazi. Ngokutsho kwedatha yakutshanje, iyakwazi ukugwetywa ukuba ngokuyisiseko yayiyimikhono emide (malunga neendolo), ngamanye amaxesha ihlotshiswe nge-embroidery kunye neepatheni zendwangu. Iingxowa zazihlala zemihla ngemihla kunye nemikhosi, umngcwabo kunye nomtshato, ukutshiza nokutshiza.
Kuzo zonke izalathisi zoluntu, iinqununu zazifanayo - intsimbi egobileyo yokuvula intloko, ehlanganiswe ngebhanti, kamva yaqala ukuthunga imikhono. Abafazi abancinci bembatha iikhati ezenziwe ngefleksi, kodwa iintombi ezintle - ezivela kwisilika esithunyelwa ngaphandle. Ngeli-XIII leminyaka, intsimbi yekotoni yabonakala.
Abasetyhini babengavunyelwe ukuba banxibe amabhande amabhinti, baqhekeke kuphela okanye batywe.
Mayelana neengubo zeSlav zasendulo zikhankanywe nje ngenkulungwane yeshumi elinesibhozo, kwaye zabizwa ngokuba yi- sarafans . Imikhono emide eboyiweyo, endaweni yekholeji, iingubo ezigqobileyo, zihlotswe ngamatye kunye nonina weparele. Ukutshiza izitya kunye nesango eliqhambileyo kubonakala ngekhulu leshumi elinesixhenxe. Ukugqoka kweso sigqoko kwakusoloko kunentsingiselo ecacileyo, ngokuqinisekileyo kukudibanisa kwabalindi kunye neempawu zeVolkhov (amahashe, iintaka, umthi woBomi, umfanekiso wooThixo kunye nemihlobiso eboshwe). Ukusetyenziswa kwepatchwork kunye ne-braid kwakusetyenziswe.
Umbala wendabuko eRussia ubomvu, kwaye bekukho malunga nama-shades angamashumi amathathu.
Izambatho kunye neengubo zeSlav zasendulo
Abaphathi beSlavic ehlabathini lonke babedume ngobucwebe babo obuqilileyo. Abaninzi bamazwe angaphandle bajonga iindalo ezihle kakhulu, bekopisha.
I-hryvnia iyinopu ​​yensimbi ehlanganiswe entanyeni, kuba iintlanga ezininzi kwakuyilindi elingazange livumele umphefumlo ukuba uphume emzimbeni. Ngokweminye imithombo, oku kwakungumhlobiso ombalwa nje uluntu luvumelekile.
Amakhonkco exeshana ayenemihlobiso yeentloko zeentloko ezibethelelwe eduze kweetempile. Babethweswe ngamantombazana angatshatanga, bexhomeke kwiibhande kunye neengqatha.
Amacici amacici anemveliso yocingo ephezulu. Ukubambisa ngokuqhelekileyo iziqhezu ezimbalwa.
Iingxowa zizona zizityebi ezidumileyo zakwaSlavic, eziqhelekileyo zifunyenwe kwizicukulo. Babenxibe ngeengubo, iiparele kunye neetambo zegolide.
Imihlobiso emikhulu ibe yindandatho enkulu yensimbi egqitywe kwiintambo okanye kwietyathanga. Okugqithiseleyo kwakuyi-pendants ngendlela ye-swastikas, iminqamlezo, i-rhombuses, i-crescent, kunye nesimo sezilwanyana.
Izambatho zeSlav zasendulo zatshintsha ngokukhawuleza, kodwa zihlala zinyani kwizithethe kunye nenkcubeko. Ngoko ke, kunomdla kakhulu kwaye kuyimvelaphi!
I-Eco-fur - yintoni na?
Owesifazane omhle kakhulu kwihlabathi lika-2014
Ukwahlula njani isikhwama sePerd yangempela?
Yintoni ekugqoka iingubo ezimpunga - indlela yokuthabatha ingxowa, inqabunga, izixhobo zokugqoka iingubo ezimpunga?
Yintoni enxiba ngayo iibhotile zebhola?
I-Photoshoot yabesifazane abakhulelweyo ebusika
Yintoni enokugqoka kwi-movie?
Yintoni enxiba ngayo amantombazana ebusika?
Izicathulo ezintle kakhulu kwihlabathi
Yintoni ongayifaka kwi-New Year's tips-tips tips
Yintoni enxiba ingubo kwinqaba?
Photoshoots zase Spring
Ugqoke ngesitayela saseTshayina
Smear kwinqanaba lokuhlanzeka - ukucacisa
I-Oil Essential Ylang Ylang
Unganisela njani utamatisi kwi-glasshouse eyenziwe nge-polycarbonate?
Yintoni eluncedo itiye kunye ne thyme?
I-beef Braised - 7 zokupheka zangaphambili zesidlo esimnandi nesinomdla
Indlela yokwenza iinduli?
I-Cupcake ngobisi olunamanzi
Imihla eyomileyo - emihle neyingozi
Indlela yokubeka ii-quad?
UKristen Stewart ungumlingani wesini?
Umhla womtshato womfazi okhulelwe ngumzimba uyaziwa
Kutheni ama-eggplants ancedo?
Ipepper enomhlaza ebusika
I-Green down jacket - yintoni ukugqoka kunye nendlela yokudala imifanekiso enemifanekiso?
Ukuhlobisa i-corridor ngelitye lokuhlobisa
I-papillomavirus yabantu - yintoni na, nendlela yokuphatha i-HPV?
Umxholo kunye neentlobo zexesha lokuphumla
Umntwana uphupha emlonyeni - izizathu
I-Photosession kwindlela yokuvuna
© 2020 xh.tierient.com